IVA 10T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 10T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA10T
IVA10T 10ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price.
VA10T ၁၀ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ကွာလတီနဲ့ ဈေးကွက်မှာ အသက်သာဆုံး ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Video of producing an IVA 10ton Stainless Steel Tube ice making machine
Currently, along with the increasing demands for purified ice, the customer's requirements for the quality of purified ice are also rigorous. However, inferior quality products are rampant in the market. Understanding this actual situation, as one of the leading companies in supplying high-quality ice machines, Viet An has researched and developed IVA10T exported stainless steel tube ice-making machines (100% New) to meet customers’ demands.
ယခုအခါမှာ ရေသန့်ရေခဲကို မှီခိုလာရတာနဲ့အမျှ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ရေသန့်ရေခဲရဲ့ ကွာလတီက အရမ်း တင်းကြပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အရည်အသွေးနိမ့် ပစ္စည်းတွေလည်း ဈေးကွက်မှာ ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ Viet An က အရည်အသွေးမြင့် ရေခဲစက်တွေကို ပေးပို့တဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တာနဲ့အညီ ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် IVA 10T တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)တွေကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
There are many ice types, including cube ice, flake ice, nugget ice, tray ice, etc. Among which, cube ice is the most popular product with multi-function. It is widely used in various fields, from daily life, food, beverage, seafood preservation to construction. Therefore, there are also many different types of ice-making machines produced to meet these diverse demands.
ရေခဲတုံးများက ကုဗတုံးပုံစံ၊ အလွှာပုံစံ၊ အပိုင်းအစ၊ လင်ဗန်းပုံ စသဖြင့် မျိုးစုံရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးထဲမှာ ကုဗတုံးပုံစံ ရေခဲက လုပ်ငန်းစဉ်တွေ များစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် နာမည်အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒီဟာကို နေ့စဉ်သုံး အစားအသောက်၊ အချိုရည်၊ ပင်လယ်စာများ ကြာရှည်ခံခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေ ကြိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
The ice-making machines are designed with various capacities, ranging from 800kg/24h to 30ton/24h.
ရေခဲထုတ်စက်များကို ၂၄ နာရီတွင် ၈၀၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၃၀ တန်အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမျိုးစုံအတွက် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
When considering an ice-making machine, the customer often pays much attention to the price, quality, safety and hygiene requirements, ice-making duration, etc.
Viet An’s ice-making machines all apply the most advanced technology to improve the finished ice quality and uniformity.
ရေခဲထုတ်စက်ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူသူများအနေနဲ့ ဈေးနှုန်း၊ ကွာလတီ၊ လုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်များ၊ ရေခဲထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်တို့ကို သတိပြုရပါမယ်။ Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ရေခဲတွေရဲ့ ကွာလတီပြည့်မီစေဖို့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
The article below will bring you valuable information to make the best decision. Viet An’s IVA10T - 10ton Industrial ice-making machine hasasmart and compact design that is easy to install and clean. Also, it is capable of energy-saving, smooth operation with sufficient, accessible replacement equipment.
အောက်က ဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်ကို ယူဆောင်လာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Viet An ရဲ့ IVA 10T ၁၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်မှာ စမတ်ကျပြီး သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းကြောင့် တပ်ဆင် သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူပါတယ်။ ထို့အပြင် အင်နာဂျီချွေတာခြင်း၊ လုံလောက်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ အစားထိုး ပစ္စည်းများပါပြီး လည်ပတ်မှု ချောမွေ့ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
IVA10T 10ton exported stainless steel ice making machine (100% New)
IVA 10T ၁၀တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
Viet An’s IVA10T 10ton exported stainless steel ice making machine is one of the most popular brands of ice cleaning machines in the market nowadays. Asahigh-quality ice making machine at reasonable price, Viet An’s stainless steel ice-making machines are always highly appreciated by the customers in the product quality surveys. Viet An’s IVA10T 10ton exported stainless steel ice-making machine is produced according to ISO 9001:2015 international quality control standards with the genuine components shipped from the world’s most advanced countries.
Viet An ရဲ့ IVA 10T ၁၀တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်က ယနေ့ခေတ် ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ ရေခဲစက်တွေကြားမှာ နာမည်အကြီးဆုံး ကုန်ပစ္စည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး ကွာလတီမြင့်တဲ့အတွက် Viet An ရဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်တွေကို ကွာလတီလေ့လာဆန်းစစ်ချက်မှာ ဝယ်ယူသူများမှ အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ Viet An ရဲ့ IVA 10T ၁၀ တန် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်များကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်း ISO 9001:2015 အတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုလည်း ကမ္ထာ့ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နိုင်ငံများမှ တင်ပို့ထားပြီး စစ်မှန်ပါတယ်။
Why do we just affirm our competitive prices instead of the best prices in the market? Because we do not intend to provide our customers with poor products.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဈေးများနေရခြင်းက ဝယ်ယူသူတွေကို အရည်အသွေးနိမ့် ပစ္စည်းတွေ မပေးချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Low ice-making machines are the machines assembled with old components such as:
အရည်အသွေးနိမ့် ရေခဲထုတ်စက်တွေက အောက်ကအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်တယ်။
Old compressors are imported after ten years of use. These machines cost from 30 million dongs only and are interested in many ice manufacturers in Vietnam.
ဖိသိပ်စက်အဟောင်းများက ၁၀ နှစ်သုံးပြီး ပြန်ပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်တွေက ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၃၀ မှစပြီး ဗီယက်နမ်က ထုတ်လုပ်သူအများစု ဝယ်ယူကြပါတယ်။
Old imported condensers
အခိုးကို အရည်ပြောင်းပေးသည့် စက်အဟောင်း
Old imported cooling towers
အေးစေသော တာဝါ အဟောင်းများ
Old imported pump system and blade set
ရေစုပ်စက်နှင့် ဓားအတွဲ အဟောင်း
And many other old components
အခြား အစိတ်အပိုင်း အဟောင်းများ
Viet An chooses another business direction. With the desire to bring customers the best products, we supply the machines using 100% new components and are produced according to the United States’ most advanced technology. This is also the reason why we can not guarantee the lowest price in the market. However, we are committed to the most competitive and reasonable prices. Let’s takealook at Viet An's 10ton ice making machine!
Viet An မှ အခြား စီးပွါးရေးလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေဆီသို့ အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းများ ယူဆောင်လာပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ၁၀၀% သစ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုထားပြီး အမေရိကန် နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါက ဈေးကွက်က ဈေးပေါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အာမ မခံတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့က သင့်တော်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေကြောင်း ကတိပေးနိုင်ပါတယ်။ Viet An ရဲ့ ၁၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်အကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Currently, only in Viet An, we apply 100% new compressor for the ice-making machines. All of our compressors are produced in foreign countries under strict quality control. It is manufactured in an automatic CNC system with automatic cutting, pressing, and molding processes. After that, it is transferred to the high-pressure testing machine - the best high-pressure testing machine imported from German.
Foaming oil due to excessive fluid remained
The liquid and gas separation system that is only available in Viet An. Therefore, the liquid and gas separation system is designed to separate the liquid from the inlet air to ensure no fluid remains in the air before it is routed into the airline for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
Viet An’s Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving. Let's imagineanew and an old ice-making machine with the same capacity, then:
After just above2years, the old machine +2years of electricity cost will be equal or higher than the price of 100% new machine +2years of electricity cost. This does not include the expenses to resolve the errors during the operation with the old machine. During these2years, the old machine can generate stable performance while the old one cannot assure this. Even if there are no errors during the first2years, until the 3rd year, the old machine will surely operate much better than the old one. With above information, it’s your right to chooseanew or old machine.
Besides, you will be offeredapackaging system for free.
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA 10T Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
Viet Ans’ commitment
Viet An ရဲ့ ကတိ
Call us now at 0949.41.41.41 or directly come to our branches in Hanoi, Ho Chi Minh city, Da Nang, Buon Me Thuot for free consultation on IVA10T exported stainless steel tube ice making machines. It is our honor to accompany you through the way!
Hỏi đáp & đánh giá IVA 10T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)